Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video iyo Music ka iPod in iPod
Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video, Calendar, Xiriirada, iMessages iyo Music ka iPod in iPod
Waxay leeyihiin in ka badan hal iPod in gacantaadu ama saaxiib ayaa iPod-aad, si aad rabto in lagu wareejiyo files ka mid iPod in kale la wadaago? Haddii wax walba oo ku saabsan isha iPod horay kaydiyaa Lugood Library, waxaad u baahan tahay inaad waxba ma samayn, laakiin xirmaan iPod cusub in computer oo ha Lugood u hagaagsan tihiin kuwo dooni wax kasta content. Haddii kale, waxaad u leedahay in aad nuqulka wax walba oo ka soo isha iPod inay Library Lugood ee hore. Si kastaba ha ahaatee, Lugood waa tababare iPod hal jid, taas oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso files iibsaday ka iPod in Lugood. Xaaladdan oo kale, inaad si fiican u noqon lahaa in qalab dhinac saddexaad caawimaad ah. The Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac waa mid sax kugu ah in dhammaan photos, music, playlists, Podcasts, Lugood U, TV muujinaysaa, Movies, xiriirada, jadwalka iyo iMessages ka iPod in iPod, maleh haddii files kuwaas oo la iibsan karo ama aan.
Qeybta 1: Sidee si ay u gudbiyaan Non-iibsaday Gadan Faylal ay ka iPod in iPod
Qeybta 2: Xulashada More in aad nuqulka Faylal ay ka One iPod in kale
Qeybta 3: Sida loo maamulo iPod Si fudud oo fudud
Hal-guji iPod in Transfer iPod
Iyadoo software iPod in iPod kala iibsiga, ayaad ugu wareejin karaan oo dhan photos, playlists, Podcasts, Lugood U, TV muujinaysaa, jadwalka, xiriirada, iMessages, Movies iyo music ka mid iPod in kale.
Bedelka oo dhan oo aan ku iibsaday iyo music iyo video iibsaday ka iPod in iPod;
Copy photos iyo albums ka mid iPod in iPod;
Bedelka jadwalka ku iPod iyo iCloud, iyo iMessages dhexeeya iPods;
Dhaqaaq xiriirada on iPod iyo iCloud, Yahoo !, Hotmail oo dheeraad ah si ay u iPod cusub;
Si fiican u shaqeeyaan iPod xiriiri 5, iPod xiriiri 4 iyo iPod xiriiri 3 socda macruufka 9/8/7/6/5.
IPod wareejiyo iPod
Nuqul iPod in iPad
Sida loo Copy Music, Xiriirada, Photos iyo Video laga soo iPod in iPod
1. Xiriirada xisaabaha: Ma doonaysaa in aad nuqul ka xiriirada in xisaab-ka iPod in iPod? Waxaad u baahan tahay inaad gasho, kuwaas oo xisaab on isha iPod ka hor inta suuqa kala iibsiga. 2. Ku rakib Lugood, Lugood in lagu xiro in aynu shaqo Wondershare MobileTrans caadi ahaan waajib ah.
Tallaabada 1. Orod Tani Software kombiyuutarka
Download software ah. Markaas ka taagay iyo waxa maamula. Si files ka iPod wareejiyo iPod, waxaad riixi kartaa Phone in Transfer Phone inay soo galaan suuqa kala iibsiga iPod in iPod.
Tallaabada 2. Connect iPods in Computer
Connect aad laba iPods in PC via fiilooyinka USB. Software Tani waxay si toos ah lagu ogaan doonaa. Markaas, iPod-aad ka muuqan doona in ay suuqa kala.
Tallaabada 3. dhaqaaq Photos, Video, Xiriirada, Calendar, iMessages iyo Music ka Mid iPod in kale
Guudmar files si loo hubiyo in wixii aad ku socoto ay u guuraan. Haddii bartilmaameedka iPod ayaa badbaadiyey files badan oo aad rabto in aad tirtirto, aad sax kartaa xogta oo cad ka hor inta nuqul Markaas, riix Start Copy inuu ku soo bilowdo kala iibsiga iPod in iPod. Xasuusnow inaad haysatid labada iPod xiran ee nidaamka oo dhan.
Ka iPod Demi Music inay iPhone
Xogta laga iPod wareejiyo iPad
Music Nuqul ka iPod in Android
Faylal ay ka dhaqaaq iPhone si iPhone
IPad wareejiyo Android Phone
Faylal ay ka dhaqaaq HTC in iPad
Bedelka ka Android inay macruufka
Xogta laga Nokia wareejiyo iPhone
Demi Xogta laga BlackBerry si iPhone
Xogta laga iPad Bedelka in Samsung
Music ka iPod dhaqaaq HTC
Ka sokow Wondershare MobileTrans ah, waxa kale oo aad nuqul karo files dheeraad ah oo ka soo iPod in iPod adigoo isticmaalaya kaabta iyo Soo Celinta shaqada Lugood. Iyadoo Lugood, aad sawiro gurmad iyo videos in Roll Camera ah, iMessages, xisaab Calendar iyo heshiiska, wallpapers, calaamo farriinta codka goobaha, Network ka dibna soo celin karaa si kale iPod ah.
Faa'iido: Dhulku lacag la'aan ah. Noocyo badan oo kaabta faylasha Qasaarooyinka: baahan tahay waqti aad u badan.
Talaabada 1: Isku ilaha iPod in computer iyo ordi Lugood. Your iPod lagu soo bandhigi doonaa hoos AALADAHA .
Talaabada 2: Guji si aad ah isha iPod si ay u muujiyaan guddi gacanta ay xaq. Tag qaybta kaabta iyo dooran Back Up Hadda .
Tallaabada 3: Marka geedi socodka gurmad la dhammeeyo, furaysto aad isha iPod iyo xiriiriyaan diirada iPod in kombiyuutarka.
Talaabada 4: In gacanta guddi iPod, riix Soo Celinta kaabta ... iyo doortaan gurmad file ugu danbeeyay ee gurmad.
Ma files laga soo wareejiyay iPod in iPod? Hadda, waxaa la gaaray waqtigii ay u maareeyaan files kuwaas oo aad diirada iPod. The TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondershare (Mac) waa tababare iPod si gaar ah loogu tala galay ah, kuwaas oo xajiya, music, video, sawiro ku saabsan iPod si fiican loo maamulo.
Waxaa si buuxda la jaan qaada iPod xiriiri socda macruufka 9/8/5/6/7, dhamaan noocyada of classic iPod, nano iPod, iyo shaandheeyn lagu iPod
Feature 1. Transfer iPod in Lugood / Computer. Bedelka music video iyo in Lugood Library iyo ka badan si uu computer.
Feature 2. Nuqul Lugood / Computer si ay iPod la xafidaada files jira. Music Copy, video ka Lugood in iPod iyo sida Photos ka computer si iPod.
Feature 3. audio badalo iyo video. Beddelaan kasta oo maqal ah leheyn iyo video in iPod qaabab saaxiibtinimo.
Feature 4. Maamul xiriirada on iPod ka computer Windows ah. Dhaqaaq xiriirada iyo ka iPod ee yaalla, oo ku milmaan kuwa nuqul. (Version Windows oo keliya ayaa sameeya)
> Resource > Windows > Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video, Calendar, Xiriirada, iMessages iyo Music ka iPod